Wararka Maanta: Arbaco, Oct 10, 2018-Shirweyne lagaga doodayo wixii Somaliland u qabsoomay 27 sanno oo ka furmay Hargeysa
Shirkan oo ay kasoo qayb-galeen wafuud ka socota In ka badan 20 (labaatan) dal oo kamid ah dalalka dunida, isla markaana ay soo abaabushay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland, ayaa laga jeediyey hadallo ku saabsan guulihii ay Somaliland gaadhay iyada oo aan cid kale gacan ka helin, jidka dheer ee ay usoo martay halka ay maanta taagan tahay iyo waliba caqabadaha hortaagan ee u baahan in meesha laga saaro.
Xubno isugu jira xildhibaanno, siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo diblomaasiyiin ka kala socday dalalka caalamka oo halkaas ka hadlay, ayaa si isku mid ah Somaliland ugu bogaadiyey guulaha la taaban karo ee ay gaadhay muddadii ay jirtey, waxana ay hoosta ka xarriiqeen inay Somaliland kala shaqayn doonaan sidii ay uga gudbi lahayd dhammaanba wixii caqabado ah ee horyaalla.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo horumarinta caalamiga ah, Dr. Sacad Cali Shire ayaa shaaciyey inay Somaliland gaadhay guulo waaweyn oo soo jiitay dunida kale iyo saaxiibada Somaliland ee daafaha adduunka, isla markaana ay kasoo gudubtay caqabado tiro badan, kuwa haatan horyaallana ay diyaar u tahay inay isku duubni shacab iyo dedaal dawladnimo kaga gudubto.
Wasiir Sacad Cali Shire waxa uu tilmaamay in ictiraaf la’aantu safka hore kaga jirto caqabada Somaliland hortaagan muddadii 27-ka sano ahayd ee ay jirtey, isaga oo xusay in Somaliland si buuxda uga soo baxday dhammaanba wixii shuruudo ahaa ee ku xidhnaa helitaanka ictiraaf caalami ah, isla markaana ay weli maqan tahay xuquuq weyn oo ay shacabka reer Somaliland dunida xaq ugu leeyihiin.
Madaxweyne Muuse Biixi oo si rasmi ah shirweynahan u daah-furay, ayaa isaguna ku dheeraaday sidii ay shacabka reer Somaliland ugu soo dhabar-adaygeen inay noqdaan qaran taabbo-gal ah oo isku filan, waxana isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi, “Somaliland waxa ay taariikhda ku gashay inay tahay dalka qudha ee gudihiisa kaligii taliye kula dagallaamay ee uu u adeegsaday inuu diyaarado ku dumiyo magaalooyinkii ee haddanna ka guulaystay adkaysigooda iyo niyad-adaygooda birta ah. Waxa kale oo ay Somaliland taariikhda ku gashay in iyada oo dagaalka intaas le’egi ku dhacay oo dadka colaad lagu dhex abuuray inay haddana iyadu dhisto dawladnimo iyo midnimo iyada oo aan cid kale u oggolaan inay soo faro-geliyaan”.
Shirweynahan lagu gorfaynayo guulihii ay Somaliland gaadhay muddadii 27-ka sano ahayd ee ay jirtey iyo caqabadaha ka horyimid, ayaa socon doona muddo laba maalmood ah, waxana lagu wadaagi doonaa aragtiyo aqoon ku dhisan oo la xidhiidha sidii looga gudbi lahaa wax kasta oo lugta qaban kara hiigsiga fog ee qarankani leeyahay.